I-AllEROED, DENMARK, DECEMBER 2, 2019 - Ama-YouTubers, abaqambi bemisindo, abahleli bama-podcasters, ama-vlogger kanye nabanye abadali bokuqukethwe, kufaka phakathi abenzi bamabhayisikobho abafuna ukuthwebula umsindo oqondile wokuntywila ngamaphrojekthi abo, manje bangakwenza lokho ngokukhulu ukubonga kumenyezelwa entsha I-4560 CORE Binaural Headset Microphone kusuka kumenzi waseDenmark, Ama-Microphones e-DPA.
I-headset entsha ye-binaural ihambisa ikhwalithi ephezulu yomsindo lapho imikhiqizo ye-DPA idume khona emhlabeni jikelele. Izinga lobuciko bemakrofoni libavumela ukuba basebenzise, ​​ngesikhathi sangempela, lokho ngqo endlebeni ngayinye ekuzwayo ukuze labo abalalela ama-headset bakwazi ukuzwa umsindo ogcwele wokuntywila. Lezi zimfanelo zibuye zikhangeke kwezinye izinhlelo zokusebenza ezifana namadokhumenti wohlelo lomsindo, ukuhlaziywa komsindo, ukuhlolwa kwekhwalithi yomsindo, nomsindo wemikhiqizo yaseshashalazini noma yemidlalo, phakathi kwabanye. Abaculi be-jazz kanye nabaculi bakudala nabo babonile okuhle kule mic: ukuqopha umsindo ngokubuka kwabadlali esikhundleni sezibukeli kuyindlela entsha ngokuphelele yokwabelana ngomsindo wabaculi nabalandeli. Umphumela, okuhlangenwe nakho kokugcina okuzungezile.
Enhliziyweni ye-DPA entsha ye-4560 CORE Binaural Headset iyibhangqa le-4060 CORE Miniature Microphones ebekwe izingwegwe ezimbili zezindlebe futhi ihlale ngaphandle komsele wendlebe womsebenzisi (njengephedi lezindlebe). Lokhu kwenza ukuthi ukwazi ukuthwebula ngqo (i-1: 1) umsindo owuzwe umuntu owenza ukuqopha. Izikhubekiso zezindlebe zixhunywe kwikhanda eliguquguqukayo elilula ukulingana, ukukhululeka ukugqoka futhi ukulungiswa kalula ukuze lilingane nobukhulu bekhanda ngalinye. Kuhlinzekwa izikrini ze-Foam kanye nemakrofoni ukuvikela isikhundla sazo futhi kunikeze ukudambisa umsindo womoya.
Ama-4060s abelokhu kungukukhethwa kwamarekhodi omsindo amaningi kwizithombe ezinyakazayo ezinkulu, njengokuthi I-Spider-Man: i-Homecoming futhi Umsebenzi: Akunakwenzeka - Ukuwa. Kuyiqiniso elaziwayo ukuthi ama-lavaliers we-4060 ngamanye angakwazi "ukugcotshwa" ezindlebeni ukwenza okuqoshwa kakhulu kwe-binaural. Manje, kunesisombululo esiphelele esinesethi yemakrofoni ebhangqwe ngokucophelela esondele kakhulu ekuzwisaneni ngangokunokwenzeka.
Ngaphezu kokugqokwa kalula, ama-4560s angakwazi ukunamathela kugiya lokuqopha, njenge-DPA's MMA-A Digital Audio Interface, exhuma kunoma yimaphi amadivaysi e-iOS. Lokhu kunikeza abasebenzisi isixazululo esisheshayo nesilula sokuqopha i-binaural mobile nganoma yisiphi isilungiselelo.
"Ukuqoshwa okwenziwe nge-XPAUM ye-CPA ye-DPA ye-DPA kunembile kangangokuba abalaleli bavame ukuphendukisa amakhanda bafuna umthombo womsindo," kusho umphathi we-DPA Product uRene Moerch. “Okufanelekile, okuqukethwe okurekhodwe ngalo mkhiqizo kufanele kulalelwe ngama-headware njengoba isipiliyoni somsindo sehluke kakhulu uma sidlalwa emuva kwizipikha zestereo. Kodwa-ke, kukhona amasu anganikeza ukulungisa kanye ne-upmix yamafomethi we-stereo ne-multichannel, okwenza lo mkhiqizo ube owusizo kwabasebenza ukuqopha amafilimu abafuna ukuqoqa okuqukethwe ngomsindo womkhathi. "
UMoerch wengeza ukuthi esinye isici esisebenzayo se-DPA 4560 CORE Binaural Headset Microphone yikhono layo lokukhohlisa; imakrofoni incane kakhulu ukuthi othile ogqoke ihedsethi ingabonakala sengathi bagqoke izindlebe nje kuphela. “Lokhu kungaba wusizo olukhulu kubantu abaqopha ezindaweni ezinobutha lapho kungaphephile noma kufanelekile ukukhombisa imakrofoni,” kusho yena. "Ngemikhiqizo yendabuko efana ne-podcast ngokwesibonelo, ukurekhoda nge-binaural kunikeza okuqukethwe okucwiliswa kakhulu, okuphila nokuphoqayo uma kuqhathaniswa namasu wokuqopha wendabuko."
I-Microphone entsha ye-DPA entsha ye-DPA ifakwe kuhlu lwe- $ 4560 USD. Ngeminye imininingwane sicela uvakashele www.dpamicrophones.com/4560.
I-4560 CORE Binaural Headset Microphone Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ama-Microphones e-DPA I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Isibonakhulu sentloko umsindo ocwilisiwe i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw umsindo ozungezayo Umlingisi wevidiyo 2019-12-02
Ngaphambilini: I-DPA's New 4560 Core Binaural Headset Microphone Simplives Capture Sound Capture
Olandelayo: I-KRK limited Edition ROKIT G4 "Noise White" Monitor Manje Iyatholakala